Harowo.com | HarawoNews – Somalia Information & Analysis – Afar Dal oo Yurub doorashada 2017 qaadaya Wadada Trump u xaadhay Ee Ajnabi/Muslim nacaybka ah
Afar Dal oo Yurub doorashada 2017 qaadaya Wadada Trump u xaadhay Ee Ajnabi/Muslim nacaybka ah
Nov 12, 2016 SOMALI NEWS 0
Qaar ka mid ah jaraaidada waaweyn ee dalalka Yurub waxay cinwaankooda far waaweyn ku qoreen kalmadahan(Here are the countries that can follow Trump’s way in 2017) “oo soomaali ku noqonaysa wadamada sanadka 2017 qaadi kara jidka Trump” ama waxan odhan karnaa wadada shacbiga maraykanku mareen, waxay intaa sii raaciyeen “Trump is just the beginning” Trump waa bilow kaliya oo macnaha ka dambeeyaa yahay hadeed waa Tusbax furtay. Murti soomaaliyeedna waxay tiraa geela duqdiisu durduriso aarankana maxaad ka filaysaa. Marka wadankii dunida Dimuqraadiyada iyo is-dhexgalka bulshooyinka horseedka u ahaa uu albaabka ka baxo wadamadii kale ee uu dabarka u ahaa maxay samaynayaan.
Welwelka ugu wayn ee wax garadka Yurub qabaani waa saamaynta doorashada maraykanku ku yeelanayso siyaasada Yurub iyadoo jaanis siinaysa xisbiyada xagjirka ah ee xumaanta la muudh-muudhay.
Tan iyo intii dalka boqortooyada ingiriiska oo ay ehel yihiin dadka cad ee maraykanka uu ka baxay Midowgii Yurub waxa sii xoogaysanaysa aragtida kala guurka ama kala gurashada reer galbeedka si uu wadan waliba ugu madaxbanaanaado go’aamadiisa iyo danihiisa gaarka ah. Ka bixitaanka Ingiriiska ee midowga yurub waxay qayb libaax ka qaadatay dhiiri-galinta shacbiga mareykanku ay ku dhiiradeen inay codkooda siiyaan Trump oo ololaha ku galay waxyaabo badan oo siyaasiyiinta wadamada ilbaxa ah hagi jirtay ay u arkayeen dib u dhac iyo wax lasoo dhaafay.
Hadaba Qaar badan oo ka mid ah hogaamiyayaasha mucaaradka ee ku mashquulsan siyaasada fogaatay ee faashistiga ah ayaa ka mabsuuday guusha Donald Trump iyagoo u arka fursad iyo guul usoo hoyatay aragtidoodii hangoolka dheer la isaga hayay iyagoo wakhti xaadirkan si fudud ugu qancin kara bulshada waxa ay rabaan.
Inta badan wadama shil-shilis ee reer Galbeedku waxay u arkaan in la isku tun go’ay dhinaca dhaqaalaha kadib markii la dhisay Yurub sal-balaadhan oo yurubta bari oo caydh ah lagu soo daray midowga, taasoo sabab u ahayd ka bixitaanka boqortoyada UK,
Arinta qaxootiga khaasatan muslimka ah ayaa iyadu noqotay muftaaxa hogamiyayaasha garabka midig ku furfuraan qalbiyada shucuubta yurub oo aragtida sinnaanta ee xisbiyada garabka Bidix u xidhnaa tan iyo wixii ka dambeeyay dagaalkii 2aad ee dunida.
Jihada Cusub ee hogaamiyayaasha reer Galbeedku shicibkooda u jeexeen ayaa laga cabsi qabaa inay colaado cusub abuurto dibna ugu celiso raadkoodii. Waxa dhici karta in wadamada buur-buuran ee reer galbeedku ka mid noqdaan Ilbaxnimoyinkii dunida soo maray oo taariikhda dugsiyada lagu dhigan doono.
Ifafaalaha muuqda waxan la qariibsan karin in dhawaan ururada xagjirka ahi gabi ahaanba wadamada yurub ka faraxashaan, marka ay la wareegaanna ay sharciyadii hore oo dhan rifi doonaan kuwo cusubna dhaqan galin doonaan. Sharciyada cusub ee welwelka weyn laga qabo waxa ka mid ah kuwa soo galootiga.
Waxyaabaha isbedeladani la iman doonaan saamaynta ay ku yeelan doonaan dadyowga muslimka ah ee ku dhaqan wadamada aan muslimka ahayn i waxay noqon doontaa mid weyn oo welwelkeeda leh.
Xuquuqda sinnaanta, madaxbanaanida iyo ixtiraamka iyaga iyo diintooduba ay dalalkaas ku haystaan masii jirayso.
Siyaasadaha cusubi waxay wataan afkaaro qallafsan oo ka dhan ah diinta Muslimka iyo dadka muslimka ah. Waxay faro-galin doonaan masaajidada, madarasadaha iyo barashada quraanka, labiska hablaha muslimka ah, cuntada IWM. Waxay soo rogi doonaan goobaha shaqada iyo waxbarashada qawaaniin odhanaysa waa in dadka noo yimi ku dhexmilmaan bulshadayada,taasoo macnaheedu tahay inay dhaqamadayada qaataan.
Afarta wadan ee dhawaan doorashadu ka dhacayso ee qaadaya dhabbada Trump waxay kala yihiin
Ostarika, Holanad, Faransiiska iyo Jarmalka, Ostarika oo bisha dambe ay ka dhacayso marka laga reebo sadexda kale 2017ka ayay ka qabsoomaysaa
Holand waxay qabsoomaysaa 15ka Mars 2017 . Hogamiyaha ururka xagjirka ah ee Trump jidka u xaadhay waxa la yidhaa Geert Wilder. Waa ninka ku caanbaxay Muslim naceybka.
Wuxu ballan qaaday sadex arimood, 1. Masaajidada inuu xidho. 2. Quraanka inuu ka mabnuuco Holland. 3, Inuu Yurub ka baxo.
Ostarika waxay dorashadu qabsomaysaa dhamaadka sanadkan, ballan qaadyada hogaamiyaha xisbiga xagjirka ah ninka la yiraa Norbert Hofer ee Trump jidka u xaadhay waxa ka mid ah la dagaalanka soogalootiga iyo inuu ka baxo Yurub, muslina hadalkiisaba daa.
Marine Le Pen waa hogamisada xisbiga Front National ee dalka Faransiiska waa haweenaydii ka mashxaraday doorashadii Trump, Haweenaydani waxay ballan-qaaday hadii ay guulaysato in ay soo celinayso xukunkii dilka ahaa, dalka Fransiskana ay ka saarayso midowga Yurub,cadaadiska muslimiinta dalkaas ku dhaqanina waa himiladeeda, doorashaduna waxay dhacaysaa Abril iyo May 2017.
Jarmalku wuxu ka midyahay dhidibada Yurub doorashadiisu waxay dhacaysaa Dayrta sanadka 2017, waxa hubaal laga dhigayaa in xisbiga xagjirka ah oo dhawaan faro-cidideed lagaga badbaaday uu talada dalkaas la wareego, wuxuna noqonayaa xisbigii koowaad ee ajnabi la takoor ah ee Hitler dabadii saaxadda soo fuula.
Sheekaba waxay taagantahay Qaarada Yurub iyo Dadkii usoo qaxay. Bal aan dhawrro dharaaro soo socda.
Afar Dal, Ee Ajnabi Muslim, Jihada Cusub, Wadada Trump
DAAWO Sweden oo laga cabsi qabo in doorashada 2018-ka ay ku dhacdo gacanta xisbiga xagjirka iyo socod ay ku mareen Caasimada Degdeg:- Trump oo Noqonaya Madaxweynaha Maraykanka iyo Doolarka oo Dhulka Galay + Faa'idada ugu Jirta UK